शिक्षामन्त्रीलाई पत्र- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
असार २८, २०७६ उषाकिरण तिम्सेना
प्रिय कमरेड, महान कमरेड ।
क्रान्तिकारी लालसलाम ।
विश्वविद्यालयमा फेल भएकाले
गोल्ड मेडल लिएको र
घूस खाएर गोल्ड मेडल दिएको?
नम्बर घटाएको र
पैसा लिएर नम्बर थपिदिएको?
के तपाईं अक्षर चिन्नुहुन्छ?
साँच्चि तपाईं होसमै हुनुहुन्छ?
अँ तपाईं बोलेको सुनेको थिएँ
तपाईं चर्कंदै हुनुहुन्थ्यो
निजी मेडिकल मालिकको पक्षमा
हो त्यतिबेलै चिनेको हुँ
तपाईंको विद्वता, विचार र लगाबलाई !
तपाईं चर्को सुनिनुभएको थियो
उही व्यापारीको पक्षमा।।
तपाईंले समाचार नपढे पनि
समाचार नबुझे पनि
नबुझेजस्तो गरे पनि
मलाई एक–एक कण्ठ छ
को तपाईंको ढोका ढकढकाएर
प्राज्ञको फुली लाउँछ
र, लखर–लखर हिँड्छ नेताको
दैलो दैलो !
जसरी हिँड्छन पाले दाइ
घडी भवनको कोठाहरुका ताल्चा खोल्न
(त्रिविको ठूलो मानविकी भवन)।
बेथितिको लामो विवरण जान्न
हेर्नुस् आफ्नै अनुहार
नियाल्नुस् आफ्नै दिनचर्या।
साँच्चै तपाईं समाचार पढ्न जान्नुहुन्छ भने
अक्षर चिन्नुहुन्छ भने
होस सम्हालिरहनुभएको छ भने
अलिकति भने पनि नैतिकता रहेको
‘जागिर’ बाट राजीनामा दिएर !
प्रकाशित : असार २८, २०७६ १२:००
यौवन, यौन र युवा !
असार २८, २०७६ शिव प्रकाश
यौवन– वशमा छैन वासना फूलको के दोष ?परस्परका प्रतीक हुन् यौवन र फूल  । एउटा समय हुन्छ मानिस मादक बन्छ  ।
चित्त परागचेतनामा डुब्छ । फूलको जस्तै वशमा हुँदैन यौवनको वासना ! मान्छेले उसलाई युवा देख्छ ।
जब यौवन र यौन वयल खेल्न थाल्छन् शरीरमा कामका काँढा उम्रिन्छन् । मस्तिष्कमा वासनाको वायु मडारिन थाल्छ । कामुकता बढ्छ– तिमी ठान्छौ म युवा हुँ !
तर कामुकता यौवन र यौनसँग सम्बन्धित छ, युवासँग हैन । एउटा शरीर यौन र यौवनको घर मात्र भयो भने त्यो शरीरलाई युवा भनिदैन । शारीरिक आकार, आकृति, रचना र संरचनमा फरक हुनु यौवन हुन हो, युवा हुनु हैन ।
यद्यपि उपनिषद् (कठोपनिषद्) ले शरीरलाई धेरै माथि राखेको छ । भन्छ— शरीर माध्यम खलु
धर्मसाधनम् ! शरीरलाई धर्मको माध्यम र साधन मानिएको छ । धर्मलाई कर्म र कर्तव्यका रूपमा हेरिएको छ । स्वस्थ शरीर पहिलो सुख मानेको छ ।
यौवन अर्थात् जवानी ! त्यही उपनिषद्अनुसार यौवनको अर्थ यतिमा मात्र सीमित छैन । स्वस्थ जीवन र चेतनाको नाउँ हो यौवन । यौवन काया – यौवन विचार !
एउटा समय हुन्छ, जुन समयमा निडरताले जन्म लिन्छ तर अनुशासनको मृत्यु हुन्छु । उग्रचेतनाको समय ! मानिस ठान्छ— सबै जान्दछु, सबै बुझ्छु । जे गर्न पनि सक्छु । जे गरे पनि हुन्छ । सबैभन्दा बलियो देखिन चाहन्छ, हिन्दी सिनेमाको हिरोजस्तो । ऊ ठान्छु म युवा हुँ– तर हैन, हुँदै हैन ।
जवानीको विकार मात्र हो, उग्रउत्तेजना ! उग्रउत्तेजना हैन उत्प्रेरणा हो, युवा । युवा हुन जवानी शरीरमा मात्र हैन, सोचमा हुनुपर्छ । छातीमा हैन, मस्तिष्कमा हुनुपर्छ । अनुहारमा हैन, चेतनामा हुनुपर्छ । शरीर र चित्तमात्र रत भएर हुँदैन मस्तिष्क र चेत पनि रत हुनुपर्छ ।
पराग र पालुवाजस्तै हुन् चित्त र चेतना ! पराग हराउँदै जान्छ, पालुवा बढ्दै जान्छ । युवा– पराग हैन, पालुवा हो । चित्तको आयतन सानो हुन्छ । चेतना र आकाश उस्तै हुन् । युवा चित्त हैन, चेतना हो ।
यौवन बिनानिम्तारु पाहुना हो तिम्रो शरीरको । आफैं आउँछ–आफैं जान्छ । तर युवा जन्माउनुपर्छ । काया हैन, कर्म हो युवा ।
यौन–भोक, भोग र सम्भोग ?
यद्यपि, यौनका बारेमा कुरा गर्ने हामीसँग स्पष्ट भाषा छैन । निश्चित माध्यम छैन ।मानिस सबैभन्दा बढी उत्सुक यौनमा छ । त्यही मानिस सबैभन्दा बढी यौनमै विमुख हुन बाध्य छ । यौनलाई कसरी हेर्ने, कसरी बुझ्ने ? फ्रेन्च शब्द सेक्जे र ल्याटिन सेक्सस मिलेर बनेको शब्द सेक्स अर्थात् यौन । जसको अर्थ भोक, भोग र सम्भोग अर्थात् रतिसँग मात्र छैन । यौनले गुप्ताङ्ग र लैंगिकता, सम्भोग र प्रजनन, यौनाकर्षण र चेतना, यौन संशय र संहिता तथा यौन निग्रह र उन्माद आदिलाई पनि जनाउँछ ।
काम र जीवनदर्शनको ठूलो पाटो पनि यौनसँग जोडिएको छ । स्त्री र पुरुषबीचको स्पष्ट भेद पनि यौन हो भने सम्बन्धको बलियो सेतु पनि यौन हो । मानव जीवनका आधारभूत चार पुरुषार्थमध्ये काम यौनमा आउँछ । सबैभन्दा प्राचीन ऋग्वेदले धर्म, अर्थ र कामपछि मोक्ष प्राप्तिको बाटो तय गरेका कुरा पाइन्छ । संस्कृतमा दुई शब्दको एउटा वाक्य छ— धमार्थकामेभ्यो नमः ! कामसूत्रको रचनासूत्र हो, यो वाक्य । धर्म र अर्थसँगै कामलाई वन्दना गर्दै यही वाक्यबाट कामसूत्रको श्रीगणेश गरे वात्स्यायनले । कामसँगै मानिस अनेक भाव र भावनासँग जुध्छ ! मानिसको जटिलता देखेर नै सायद महर्षी वात्स्यायनले कामसूत्र लेखे । यौनलाई कामदर्शनका रूपमा व्याख्या गरे । आचार्य ओशोले यौनलाई ऊर्जा माने । वेदले मोक्ष र ब्रह्मप्राप्तिको माध्यम मान्यो ।
यौनलाई बुझ्न यौनारम्भमा जानुपर्छ । जसलाई वयःसन्धि पनि भनिन्छ, अंग्रेजीमा प्युवर्टी । प्युवर्टी नै मानव जीवनको एउटा ढोका हो । यसैले यौवनको ढोका खोलेर यौनारम्भमा प्रवेश गराउँछ ।
किशोरावस्थाको प्रवेशद्वार हो, प्युवर्टी । जीवनको वसन्तकाल ! सौन्दर्यमुखी हुन्छ मानिस । मदकाल अर्थात् कामऋतुमा प्रवेश गर्छ । प्रकृतिजस्तै प्राणी–जीवन पनि ऋतुचक्रमा घुम्न थाल्छ । यौनेच्छ सुरु हुन्छ । हामी ठान्छौं युवाकाल हो तर युवा हैन, यौवनकाल हो, यो ।
यौनेच्छा अर्थात् यौनको आवश्यकतालाई मात्र बुझेर युवा वा वयस्क हुँदैन । यौनको मर्यादालाई पनि बुझ्नुपर्छ । प्रीति र रति यौनेच्छासँग गाँसिएका छन् । तर प्रीतिको आफ्नै रीति छ । रतिको आफ्नै गति छ ।
एउटा क्रियाबाट उत्पन्न हुने प्रक्रिया हो– यौनेच्छ । प्युवर्टीको वाइप्रडक्ट (सह–उत्पत्ति) हो, यो । जब यो प्रक्रियामा मानिस प्रवेश गर्छ उसले आफूलाई युवा ठान्न थाल्छ तर हैन ।
यौनलाई यौवनसँग, यौवनलाई यौनसँग र यौवन तथा यौन दुवैलाई युवासँग गाँसेर हेरिन्छ । तर मानिस जन्मदेखि मृत्युपरन्त यौनसँग गाँसिएको छ । मानिस सधैं यौनिक प्राणी हो । यौवन जीवनको एउटा ‘ककटेल’ समय–अवधि मात्र हो । युवासँग यौन र यौवनको सम्बन्ध छैन ।
यौनलाई परिभाषित गर्न कुन कोणबाट हेर्ने ? त्यसैमा भर पर्छ यौनको परिभाषा । यौनिक सक्रियता सुरु हुनु भनेको युवा हुनु हैन, एक अर्थमा यौवन हुनु मात्र हो । यौन जैविक हो । यौवन शारीरिक हो । युवा मानिसिक अर्थात् ‘स्टेट अफ माइन्ड’ हो । यौवनको सम्बन्ध शरीरसँग हुन्छ । युवाको सम्बन्ध चेतनासँग । यौवन यौनको भोको हुन्छ । युवा विचारको भोको हुन्छ ।
युवा– कन्टेन्ट कि कन्टेनर ?
जीवनको गुमेको अवधि हैन वर्तमान र बाँकी अवधि हो, युवा । एडल्फ हिटलरको एउटा भनाइ छ– ‘जो आफूलाई युवा ठान्छ उसले भविष्य पाउँछ ।’ भनिन्छ, उनले आफ्नो हातको भाग्यरेखा आफ्नै चक्कुले कोरेका थिए । एक समय विश्वकै सर्वशक्तिमान बनेका हिटलरका हरेक पाइला उद्देश्यउन्मुख बने । जसले आफूलाई सधैं युवा ठाने । उद्देश्य र आकांक्षाले उनलाई सधैं ऊर्जावान् बनायो ।
जीवन सधैं सम्भावना हो । जीवनबिना मृत्यु पनि असम्भव छ । जहाँ प्रयास छ त्यहाँ प्राप्ति छ । युवा त्यो हो जसले आफ्नो भविष्यको गर्भ आफैं धारण गर्छ ।
तिमी लाठे भयौ, आफूलाई युवा ठान्छौ । तिम्रा बाबुआमाले तिमीलाई जन्माए तर युवा तिमीले जन्माउनुपर्छ । आफैंले आफैंभित्र जन्माउने आफ्नै सन्तान हो, युवा । आफैंले आफैंभित्र आफैंसँगै हुर्काउनुपर्छ, त्यो युवा । आफैंभित्र बचाउनुपर्छ, त्यो युवा । त्यो युवाको नाउँ हो– चेतना !
सिद्धार्थ गौतमको जन्म मायादेवीको कोखबाट भयो तर गौतम बुद्धको जन्म उनको आफ्नै कोखबाट भयो । चेतनाको कोखबाट जन्मिएको सिद्धार्थ गौतमको आफ्नै सन्तान हो, बुद्ध !
बुद्धको शाब्दिक अर्थ हो, बोधी ! बोधीको अर्थ हो, बुद्धि ! बुद्धिको अर्थ हो, बोध ! बोधको जन्म प्रश्नबाट हुन्छ । प्रश्नको जन्म जिज्ञासा र उत्सुकताबाट हुन्छ । प्रश्न नै चेतना र जागरणका जननी र जनक हुन् । समग्रमा बुद्धको लाक्षणिक अर्थ हो– प्रश्न, जागरण र चेतना !
बुद्धले ती हरेक बेकामे र बासी जवाफमाथि सधैं प्रश्न गरे । प्रमाण खोजे । जुन हजारौं वर्षदेखि भनिदै आएको थियो, भन्न बाध्य गारइँदै आएको थियो । जुन हजारौं वर्षदेखि मानिदै आएको थियो, मान्न बाध्य गराइँदै आएको थियो । प्रश्न नगरेको भए बुद्ध हुने थिएनन् सिद्धार्थ गौतम ! सायद एउटा बुद्धू राजा हुन्थे, बस्थे ।
प्रश्न गर्ने क्षमता नै ‘युवत्व’ को तराजु हो । कुनै पनि कुरा मान्नुअघि जान्नु जरुरी हुन्छ । पहिले जान, बुझ । कुनै पनि विचार र दर्शनलाई शब्दमा हैन सारमा त्यसको सत्त्व बुझ । तात्पर्य र तत्त्व बुझ । शब्दको अर्थ हैन, अन्तर्भाव र अभिप्राय बुझ । बुद्ध पनि यसै भन्थे– ‘जड हैन चेतनामा जाऊ ।’
युवा त्यो हो जसले प्रश्न गर्छ । प्रश्न गर तिनलाई, जसले तिम्रो वर्तमान लुटिरहेका छन् । जसले तिम्रा मातापितालाई लुटे, तिनैले तिम्रा सन्ततिलाई पनि लुट्नेछन् ।
तिम्रो भविष्य लुट्ने ती दुष्कर्मी र दुराचारी नै समाज र देशको मालिक र शासक बनेका छन् । सबैभन्दा धेरै पाप–अपराध, छल–कपट, लुट–पाट, हत्या–हिंसा, कुकर्म र बलात्कार तिनैले गरेका छन् । जो स्वघोषित गुरु, पण्डित, महात्मा, पन्त–पुजारी र कथित नेता बनेका छन् !
एउटा कुखुरा चोर्ने भोको नागरिक जेल जान्छ । अर्बौं चोर्ने सत्ताको मालिक हुन्छ । तिमी तिनै मालिकको दासत्वमा खुसी छौ । खराउ पुजारी बनेका छौ । ती भ्रष्टको साधन बनेर आफूलाई नष्ट गरिरेहेका छौं । तिनको फोहर बोक्ने कन्टेनर बनेका छौ तर आफूलाई युवा ठान्छौ ?
तिमी २५ वर्षका छौ । त्यसैले आफूलाई युवा ठान्छौ तर उमेर हैन, विचार हो युवा । युवा त्यो हो, जो कहिल्यै कन्टेनर बन्दैन । युवा त्यो हो, सधैं कन्टेन्ट बन्छ ।
तिमी व्यक्ति हैन वस्तु भैसकेका छौ । वस्तु हैन, व्यक्ति हो युवा । व्यक्ति मात्र हैन व्यक्तित्व हो ।
तिमी जवान छौ तर निस्चेतनको कालो मुस्लो भरिएको भारी टाउको लिएर हिंड्छौ । तिमी युवा हैन धरतीको विकृत जैविक ‘प्रडक्ट’ को ‘बाई–प्रडक्ट’ मात्र हौ । ‘बाई–प्रडक्ट’ हैन, ‘सेल्फ–प्रडक्ट’ हो युवा !
जवानी हैन, जीवनको ऊर्जा हो युवा । उदासता हैन, उद्देश्य हो युवा । अरूको आश्रय र आधारमा बाँच्ने उपजीवी हैन, त्यसको विपर्याय स्वजीवी–स्वनाम हो, युवा ।
भनिन्छ युवा भविष्यका कर्णधार हुन् तर जहाँ मानिस कहिल्यै युवा हुँदैन, त्यहाँ भविष्यको कर्णधार कसरी जन्मन्छ ? नेपालमा युवा छैनन् । युवा नभएको देशको कुनै भविष्य हुँदैन । युवा भएको भए आज देशको यो दुर्दशा हुने थिएन । मुढतासामु बुद्धि र विवेकले घुँडा टेक्ने थिएन ।
युवा भनेको विवेक हो, बुद्धि हो । तर त्यो विवेक र बुद्धि मुढतासामु लड्छ भने त्यो युवा हैन मानवरूपी काँचो मुढो मात्र हो । त्यो विवेक र बुद्धि मुढताविरुद्ध लड्छ भने त्यो युवा हो । युवा नै त्यस्तो शक्तिशाली मानवीय उपकरण हो, जसले पुराना विचार र विकामे अभ्यासलाई विस्थापित गर्छ ।
तिमी जुँगामुठे पठ्ठो हौ वा पुष्ट शरीरधारी पठ्ठी ! तिमी दास बन तर अरूको हैन आफ्नै । तिमी मालिक बन तर अरूको हैन आफ्नै । युवा त्यो हो, जो आफ्नै दास र आफ्नै मालिक पनि हो ।
यो पनि भनिन्छ, प्रत्येक बालबालिका जन्मदा प्रतिभाशून्य हुन्छन् तर मलाई अल्बर्ट आइन्सटाइनको उल्टो कथन सुल्टो लाग्छ । उनी भन्छन्– ‘प्रत्येक बालबालिका जन्मदा प्रतिभावान् हुन्छन् ।’
समाज एउटा दुष्चक्रमा चलेको छ– यो गर्नु हुन्छ, यो हुँदैन । यो पर्छ, यो पर्दैन । यो ठीक छ, यो छैन । तिमी आफू निर्णय गर्न सक्दैनौ, अरूको निर्णय मान्छौ । आफू सोच्दैनौ, अरूको सोचलाई आफ्नो बनाउँछौ । तिमी आफू बन्न सक्दैनौ अरूजस्तो बन्छौ ।
तिमी तिनै कथित नेता–गुरु, पण्डित–पुजारी, सन्त–महन्तबाट निर्देशित र नियन्त्रित छौ । यीसँगै तिम्रा आफ्नै दिग्भ्रमित मातापिता– जसले सधैं सम्भवलाई पनि असम्भव बनाइरहे । निश्चिततालाई छोडेर अनिश्चिततातिर दौडिरहे । तिनकै भ्रमको पिँजडामा बन्दी छौ । सुगा बनेका छौ, तिनैको भाषा बोल्छौ । तिनैले भन्छन्– किनभने यो वर्षौंदेखि गरिआएका छन्, गर्नुपर्छ । वर्षौंदेखि भनिआएका छन्, भन्नुपर्छ । वर्षौंदेखि मानिआएको छ, मान्नुपर्छ ।
तर किन गर्ने, किन भन्ने, किन मान्ने ? तिमी प्रश्न गर्न सक्दैनौ । प्रश्न गर्नु अपराध हो भनेर तिमीलाई तर्साइएको छ । तिमी तर्सिएका छौ । मान्छेलाई विश्वासले हैन, त्रासले जितेको छ । तिमी विश्वाससँग हैन, त्राससँग पराजित छौ । तैपनि तिमी आफूलाई युवा ठान्छौ तर युवा त्रास हैन, विश्वास हो ।
ती अपराधी हुन् जसले मानिसलाई बुद्ध बनाएर उठाउने हैन बुद्धू बनाएर लडाउने गरेका छन् । आफूजस्तै भ्रष्ट बनाएर मानवतालाई नष्ट गरिरहेका छन् । जन्मदा एउटा बालकले जुन प्रतिभा लिएर आएको हुन्छ, त्यो सारा प्रतिभा तिम्रो समाज र तिम्रा आफ्नै मातापिताले नष्ट गरिदिएका छन् । यो अपराधका लागि ती दुराचारी पण्डित, महात्मा र नेताहरू दण्डनीय छन् । तिमी तिनलाई दण्ड दिन सक्दैन, बरु दण्डित भएर बस्छौ । अझैं आफूलाई युवा ठान्छौ ? तर दुराचारविरुद्ध बज्ने दुन्दुभि हो, युवा ।
बनाउँछौ भने मानिसलाई सोच्न सक्ने बनाऊ, सोच्न देऊ । प्रश्न गर्न सक्ने बनाऊ, प्रश्न गर्न देऊ । निर्णय गर्न सक्ने बनाऊ, निर्णय गर्न देऊ । त्यही हो सबैभन्दा ठूलो कर्म र धर्म । तिमी नष्ट भैसकेका छौ । तिमीसँग न कर्म छ, न धर्म छ । तैपनि तिमी आफूलाई युवा ठान्छौ तर अनुहारमा बोकाका रौंजस्ता काला दाह्राी–जुँगा र शरीरमा यौनको राप पालेर तिमी युवा हुँदैनौ ।
युवा त्यो हो, जो सोच्न सक्छ । युवा त्यो हो, जो निर्णय गर्न सक्छ । युवा त्यो हो, जो प्रश्न गर्न सक्छ । युवा त्यो हो, जो स्वविवेकले हेर्छ । युवा त्यो हो, जो आफू भएर बाँच्छ । युवा त्यो हो, जो आत्माको आवाज सुन्छ । युवा त्यो हो, जसले आफ्नो बाटो आफैं बनाउँछ । युवा त्यो हो, जो आफ्नो बाटोमा हिँड्छ । युवा त्यो हो, जो स्वयं आत्मसम्मानको आकाश हुन्छ । युवा त्यो हो, जो स्वयं स्वाभिमानको सगरमाथा हुन्छ । युवा त्यो हो, जो स्वयं विचारको महानदी बन्छ, निरन्तर बहन्छ ।
युवा तिम्रो कालो दाह्री हैन, दृष्टिकोण हो । युवा तिम्रो पोटिलो शरीर हैन, सामर्थ्य हो । युवा तिम्रो बलियो काया हैन, कर्म हो । उत्सुकता, उत्कण्ठा, इच्छा, आकाङ्क्षा, उद्देश्य, उत्साह, उत्प्रेरणा, ऊर्जा र उच्चताको भाव हो युवा ।
चुनौती खोज्नु, स्विकार्नु र चुनौतीसँग लड्नु हो, युवा । सिर्जनात्मक चेतना हो, युवा । जुन चेतनामा उद्विग्नता, आक्रोश र छटपटी हुन्छ ।
चेतना नै मस्तिष्कको प्राण हो । त्यही चेतन मस्तिष्कको अलौकिक उत्पादन हो, युवा !
तर तिमीभित्रको युवालाई मार्ने तिम्रो दुस्मन तिमीले नै पालेका छौ । उमेर हैन, अन्धविश्वास, दुविधा, डर र नैराश्यता हुन् तिमीले पालेका ती दुस्मन ।
भाका सधैं परिवर्तनशील
‘माइतीघरमा के छ र मेरो !’
गीत खाने, गीतै लाउने
सोरठीमा माझी–कुमाले कथा
सेलो हिँडेको बाटो